Soosaarayaasha Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaal | Warshadaha Shiinaha ee Shiinaha
Dhuxusha dhuxusha ee DZH waxay ridaan qeybaha kala duwan ee wareejinta kuleylka - tuubbada xargaha leh, oo leh qulqulka qulqulka macquulka ah, hufnaanta kuleylku wuxuu ka sarreeyaa heerarka xirfadeed ee heer qaran 6 ~ 8%
Kululeeliyaha Biyaha kulul ee Hal Drum ah
DZL taxane Drum Drum kulul oo biyo kulul kuleyl ah ayaa adkeynaya qaab dhismeedka saxanka tuubbooyinka; kor u qaadista heerka amniga ee xoogga, xubinta taranka ee la fududeeyay.
Kalluumeysiga uumiga ah ee loo yaqaan 'Chain Fix Chain Coal' oo kuleylka kuleylka ah ayaa gacanta ku quudi doona dhuxusha isla markaana ku habboon noocyo badan oo qiimo hooseeya.
Biyo Kulul Biyo kulul
Kuleeliyaha biyaha kulul ee Biomass waa kuleyliyaha sedex gadaal biyo kululeeyaha iskudhaf ah. Shidaalku wuxuu noqon karaa Biyo-cuno, dhuxul, alwaax, xashiishad bariis, qolof, jaleelo, bacda, qashinka iwm.
Kuleyliyaha Wood Biomass waa kuleyliyaha saddex-gadaal biyo-kululeeyaha isku dhafan. Shidaalka kuleeliyaha waxaa loo isticmaali karaa qori, alwaax alwaax iyo iskudarka biomass kale iyo dhuxusha.
Adeegga Tiknolojiyadda Rakibaadda waxaa bixin doona XUZHOU DOUBLE RINGS MACHINERY CO., LTD si ay alaabadayadu ugu sii hayso tayo wanaagsan.
Dhuxul Duulistaha Biyo-xireenka Chimney
Sicirka qiiqa waa qaab kuleyliya qiiqa kulul ama qiiqa ka baxa shooladda, foornada, foornada ama goobta dabka lagu shito.
Shiinka qiiqa sida caadiga ah waa mid toosan, ama ugu dhow dhow, si uu u hubiyo in gaasasku ay si qunyar ah ugu socdaan, oo hawada u soo galaan waxa loo yaqaan 'sicirka qiiqa ama qiiqa qiiqa
Double Drum kuleeliyaha Biyaha kulul
Double Drum Hot Water Boiler SZL Taxanaha kulminaya tubada biyaha tubada kuleylka ah wuxuu xayeysiiyaa durbaanka dheeriga ah ee labada weji silsiladaha.